सऊदी अरबमा काम गर्ने कम्पनीहरूको पूरा सूची आवेदन गर्न 🥇
प्रकाशित दुबई सिटी कम्पनी at डिसेम्बर 26, 2017
सउदी अरब मा नौकरिहरु
साउदी अरेबियामा रोजगारहरू कक्षामा सबै भन्दा राम्रो हो। साउदी वरिष्ठ अधिकारीहरु एक भन्दा राम्रो को रूप मा थाहा छ व्यापार व्यवस्थापकहरू। क्यारियर खोजीको प्रकाशमा, तपाईंले साउदी अरबलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो कम्पनीले साउदी अरेबियामा क्यारियर खोजको बारेमा लेख लेख्दै छ। हामी यस बारे जानकारीको केही टुक्रा संगै काम गर्ने कोशिस गर्दैछौं कसरी मध्य पूर्वमा एक नौकरी खोज्न। यद्यपि यो सत्य हुन सक्छ हामी एक हो मध्य साइटमा क्यारियरको लागि उत्तम रोजगारीका लागि सल्लाहका सर्तहरूको रूपमा.
सउदी अरबमा जागिरको बारेमा अद्भुत तथ्यहरू
वास्तवमा, सऊदी अरब अरब देश हो। मा स्थित छ मध्य पूर्वमा सबैभन्दा राम्रो स्थान। सउदी अरब देश धेरै अरब प्रायद्वीपका लागि काम गर्दै। सऊदी अरबले 830,000m को एक क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दै2। अर्कोतर्फ, सऊदी देश एशियामा पाँचौं ठूलो छ। त्यसैले त्यस बिन्दुमा आधारित। तिमी सक्छौ यस देशमा एक एक्स्टात महिलाको रूपमा नौकरी खोज्नुहोस्.
ती परिस्थितिहरूमा, यो ठाउँ is एक्सटेट्सका लागि। र यो दोस्रो ठूलो अरब देश हो। सामान्यतया बोल्दै, साउदी अरेबिया देश। के जनसंख्या 35 मिलियन अनुमान गरिएको छ? त्यसैले लामो अवधि मा यदि तपाइँ एक काम को लागी खोज। तपाइँसँग त्यहाँ रोजगारी पाउनको लागि राम्रो मौका छ। साथै एकदम स्मार्ट विचार यो हुनेछ हाम्रो व्हाट्सएप समूहमा सहभागी हुनुहोस्। त्यहाँ तपाइँ अन्य बिस्तृतका साथ धेरै निमन्त्रणा लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ।
सऊदी अरब जानकारी
अग्रभूमिमा सऊदी अरबले संसारमा 40th सबै भन्दा ठूलो देश बनाएको छ। आबादीको आधारमा दु: ख त्यहाँ छ क्यारियर शिकारीहरूको लागि राम्रो स्थान। चाँडै वा पछिको तेलको काम तेल कम्पनीहरुबाट आउँछ। सऊदी अरबका लागि अर्को मुख्य बिन्दु। प्राथमिक काम र जीवित समूह अरबी हो। अनि निस्सन्देह, मुख्य धर्म इस्लाम छ।
यो दिमागमा, साउदी सरकार एक 100% इस्लाम हो। र नकारात्मक पक्ष मा, यो एक निरपेक्ष राजतन्त्र हो। एक राजासँगै मुकुट राजकुमारको साथ साथै सहायक मुकुट राजकुमारको साथ। पैसामा ध्यान दिएर, मुद्रा एक रियाल हो। अल्लाह को प्रेम को उदाहरण को रूप मा। त्यहाँ ईश्वर छैन तर अल्लाह र मुहम्मद अल्लाह को मैसेन्जर छ। साउदी अरेबियाको झण्डा हरियो र सेतो रंगमा बनाइएको छ। त्यसैले यो स्थान को एक हो नौकरी खोजकर्ताहरूको लागि उत्तम.
सऊदी अरबका कम्पनीहरू
मध्य पूर्व मा सऊदी अरब कम्पनीहरु
सउदी अरबमा कार्यको लागि कसरी आवेदन गर्ने?
एए टर्की समूह
अर्को तरिका राख्न यो कम्पनी सामान्यतया ATCO को रूपमा चिनिन्छ। कम्पनी ATCO एक धेरै संगठित र एक्सटेट उन्मुख व्यापार समूह। उदाहरणका लागि, सऊदी अरबमा डामममा आधारित कम्पनी।
एन्कोकोएक्सएनएमएक्सक्सबाट काम गरिरहेको छ कि महत्त्वपूर्ण। सबैभन्दा सम्भावनापूर्ण सबूत छ कि कम्पनीको नौकरी पाउन लायक छ सरल छ। कम्पनी पूर्णतया अब्दुलहम्मम अली अल-टर्कीको स्वामित्वमा छ। एक नौकरी खोजकर्ताको रूपमा सकारात्मक पक्षमा। यो मनमार्फत, ATCO समूहसँग बीस-तीन छ सऊदी अरबमा बस फरक फरक डिभिजन। मध्य पूर्वमा ठूलो लगानी प्रबन्ध गर्ने कम्पनीलाई सम्झना हुनुपर्छ। सामान्यतया, एक कम्पनी संयुक्त उपक्रम र अन्य संग स्ट्यान्डल मा संचालित दुबई कम्पनीहरू.
संक्षिप्त सार AA टर्की समूह गतिविधि धेरै क्यारियर क्षेत्रहरु को लागी। धेरै जसो भागको लागि कम्पनीले राम्रो रिक्त पदहरूको लागि कामदारहरू पाउँदैछ। मध्य पूर्वमा सारांश व्यापार र निर्माण क्यारियरमा। सउदी कम्पनीमा खुद्रा र आईटी सेवाहरूमा रोजगारहरू एक खेल जित्नको लागि एक तरीका हो। समय समयमा तपाईं ब्लग क्यारियर अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ.
ATCO समावेश गर्दछ 23 विभाजन, संयुक्त उद्यम, र स्टैंड-एक्लै कम्पनीहरू। समूह प्रस्ताव गर्दछ एक विस्तृत श्रृंखला को क्यारियर अवसरों को अवसरों को लागि। निम्न मध्ये एक मध्ये निम्न सहित:
ढुवानी र रसद व्यवस्थापन
दूरसंचार उत्पादन र सेवाहरू
व्यापारिक व्यापार र सेवा
पोर्ट व्यवस्थापन र समुद्री सेवा
ईन्जिनियरिङ् र करार
तेल र ग्याँस उत्पादन र सेवाहरू
Abdulla Fouad समूह कम्पनीहरु को
मध्य पूर्वमा सबैभन्दा धेरै मनाईएको सफलता कथाहरू छन्। Abdulla Fouad समूह (AFG) सऊदी अरब, रस Tanura मा 1947s मा स्थापित गरिएको छ। त्यसोभए पछि हरेक क्यानाडा चाहान्छे। निश्चित रूप देखि एक मौका हुनेछ त्यहाँ एमबीए हुनु नौकरी खोज्न.
मध्यपूर्वमा साना निर्माण कम्पनीको रूपमा यी पोइन्टहरू कम्पनीको शुरुआत दिइयो। तर मा सुधारको अन्तिम विश्लेषण। यो दुबई कम्पनी आज निर्माणमा विविध गतिविधिहरूको समूह हो व्यापार अवसरहरू.
साथ साथै ईन्जिनियरि company कम्पनीको साथ गहिरा सूचना प्रविधि ज्ञान। अवश्य पनि रियल इस्टेटको साथ लगानी व्यापार कम्पनीसँग साउदी अरेबियामा ठूलो HR र लगानी र वाणिज्यिक क्षेत्र पनि छ।
अर्कोतर्फ अब्दुल्ला फौडको व्यवसाय पोर्टफोलियो। मिडल ईजमा सुपर लोकप्रिय बन्नुहोस्t वास्तविकतामा, कम्पनीले बहुविध कम्पनीहरू र डिभिजनहरू समावेश गर्दछ। त्यसोभए त्यो आधार हो जुन तपाईं सक्नुहुन्छ 2018 मा यो दुबई कम्पनीमा आफ्नो CV पठाउनुहोस्.
कम्पनीले तेल र ग्यासमा कामदार खोज्दै। यसको अलावा, औद्योगिक र निर्माण कार्य रिक्त पदहरू अनलाइन उपलब्ध भए। AFG समूह मात्र होईन भर्ती स्वास्थ्य सेवा उपभोक्ता र रियल एस्टेट को लागी तर पनि निवेश क्यारियरको लागि। कम्पनीले सूचना र टेक्नोलोजी क्षेत्रहरुमा व्यवस्थापन अधिकारीहरुलाई पनि खोज्छ।
कम्पनी साउदी अरेबियामा शीर्ष 100 कम्पनीहरु मध्ये पनि एक हो। तथ्यको रूपमा एएफजी समूह सेवा स्थानहरू साउदी अरेबियाको राज्य भरि। सामान्यतया भन्नुपर्दा, एउटा कम्पनीसँग संयुक्त राज्यमा खरीद कार्यालयहरूको नेटवर्क हुन्छ, युरोप, र एशिया।
नौकरी मा सऊदी अरब - अबूला फौद।
उन्नत इलेक्ट्रनिक्स कम्पनी लिमिटेड (एईसीएल)
दुबई साउदी अरेबियामा कम्पनी सीमित देयता संगठन। यद्यपि यो सत्य हुन सक्छ 1988 मा कम्पनीले सञ्चालन सुरू गरिरहेको थियो।
अर्कोतर्फ, एईसी नयाँ प्रविधिमा विशेषज्ञता प्राप्त छ। AECL उन्नत इलेक्ट्रोनिक्स अनुसन्धान र निर्माण भन्दा बढी हो मध्य पूर्व मा कम्पनी। यसलाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले साउदी अरेबियामा रक्षा र संचार क्षेत्रहरूको लागि भर्ती गर्दछ।
ती परिस्थितिहरूमा, एईसीको लक्ष्य उत्तम हुने हो। सामान्यतया स्थानीय क्षमताओं र सामरिक क्षेत्रहरुमा बोल्दै। जस्तै नोटिस कम्पनी निर्माण प्रविधिहरू र संचार प्रणालीमा नयाँ प्रगति भएको छ। यो कम्पनी भर्खरै भारतीय मूल्यवृद्धि। त्यसोभए तपाईं हुनुहुन्छ भने भारतीय प्रवासी तपाईंले आफ्नो सीभी पठाउनु पर्छ।
अधिकतर भागको लागी, कम्पनी उत्पादन सहयोगमा सर्वश्रेष्ठ मध्ये एक हो। 2006 मा यो अद्भुत कम्पनीले एक रूचि सम्झौता गरेको छ। दुबई कम्पनीले Acer संग नयाँ अनुबंध व्यवस्थित गर्यो। एईसीएल मध्य पूर्व मा व्यक्तिगत कम्प्यूटर बनाउन को लागि बन गयो। र त्यो सऊदी सरकारको कार्यक्रम को भाग को लागि एक नयाँ परियोजना बन्छ जसलाई पीसी सऊदी अरब जनसंख्या को लागी सस्ती बनाउन को लागी।
साउदी अरबमा रोजगारहरू - उन्नत इलेक्ट्रनिक कम्पनी।
अहमद हामद अल गोजीसी र भाइहरू
आजको कम्पनीको टोलीमा सामेल हुनुहोस्। वास्तवमा भन्ने हो भने, यदि तपाईं दुबईमा काम खोज्दै हुनुहुन्छ भने। एएच ALGOSAIBI & BROS। यो साउदी अरेबिया व्यापार सफलता धेरै वर्ष पहिले। उही समयमा, यो साउदी कम्पनी अपवाद ब्यबस्थापक मानिसहरूबाट सुरू हुन्छ। अर्कोतर्फ मध्य पूर्व संगठनले सहजता प्रदान गर्दछ, जीसीसी देशहरूका लागि विशेषज्ञता। र उत्कृष्ट परियोजना सेवाहरू केवल GCC ग्राहकहरूको लागि मात्र होईन। तर तिनीहरूको सेवाहरूमा पनि समावेश छ दुबई सिटी.
तपाईं एक हुनुहुन्छ एक्टिट एक कामको लागि खोज्दै साउदी अरेबियामा ?. अहमद हमद अल गोसाईबी एण्ड ब्रदर्स, वास्तवमा, तपाईंलाई साउदी अरेबियाको किंगडममा अद्भुत क्यारियर अवसरहरू प्रदान गर्दछ। एकै साथ तपाईं आफ्नो अपडेट गरिएको CV का लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र यो दिमागमा, तपाईसँग सबै चुनौतीपूर्ण अवसरहरूमा क्यारियर विकास समर्थन हुन सक्छ.
कम्पनीले उच्च मान राख्दै निर्माण क्षेत्रमा सामिल हुने सबै रोजगारी खोजीकर्ता। अहमद हमद अल गोसाईबी एण्ड ब्रदर्स कम्पनीको साथ अर्को मुख्य कुरा व्यवसायको नैतिकता र मूल्य हो। सकारात्मक पक्ष मा, व्यक्तिगत उत्कृष्टता र कम्पनी भित्र क्यारियर विकास अरबी दुनिया मा महत्वपूर्ण छ.
कम्पनीले जीसीसी देशहरूको वरिपरि इनाम र मान्यता पाएको छ। ती परिस्थितिमा, कम्पनी एक्सटेट अधिकारियों लाई राखन। र यस कम्पनीको साथ, तपाईं साउदी अरब व्यापारिक संसारमा आफ्नो क्यारियर महत्वाकांक्षा निर्माण र पछ्याउन सक्नुहुन्छ। यस कारणको लागि, तपाईं कम्पनीको कामदार टीममा सामेल हुन सक्नुहुनेछ र अर्को स्तरमा व्यवसाय लिनुहोस्।
अन्तिम विश्लेषणमा, कम्पनी सक्रिय रूपमा छ शीर्ष प्रतिभा एक्स्पेट अधिकारीहरू खोज्दै जो साउदी अरेबियामा जागिर खोज्दैछन्। तपाइँ अप्रत्यक्ष रूपमा तिनीहरूको ईमेल ठेगानामा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
साउदी अरब मा अहमद हामद संग नौकरिहरु।
अल बाक रेस्टुरेन्ट र बारहरू
यद्यपि यो सत्य हुन सक्छ कि उनी शहरमा राम्रो खानाको सेवा गर्छन्। ALBAIK कम्पनीको साथ तपाईं ग्राहक सेवा पाउन सक्नुहुन्छ र प्रबंधन सञ्चालन क्यारियर अवसरों। यस कारणको लागि, कम्पनीको विश्वास छ कि टोली सदस्य खाद्य व्यवसायमा सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति हो।
यस कारणका लागि अल बाक रेस्टुरेन्ट र बारहरू। यो केवल सऊदी कर्मचारीहरु को लागि पनि को लागी एक कर्पोरेट निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ भारत र पाकिस्तान नौकरी चाहने। ती परिस्थितिहरू टोली टोलीको संस्कृति र एकअर्कालाई सम्मान गर्न। अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रहरू सँगै काम गर्न सहयोग गर्दै।
सामान्यतया यो कुरालाई ध्यानमा राखेर तपाईं वरिष्ठ स्तरका कार्यकारीलाई जूनियर पदबाट पदोन्नति गर्न सकिन्छ। लामो समयसम्म, कम्पनी प्रत्येक व्यक्ति सदस्य सदस्यलाई एक वर्ष भित्र पदोन्नति प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउँछ। जस्तै तपाई यस कम्पनीसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सबै सहयोगको साथ।
र क्यारियरका अवसरहरू प्राप्त गर्दै साउदी अरेबिया क्यारियर बजारको किंगडममा व्यक्तिगत रूपमा विकास र बढ्नको लागि। त्यसोभए अलबाइक रेस्टुरेन्ट र बारहरूको साथ व्यवसायिक रूपमा संक्षिप्त गर्न पूर्ण क्षमता हासिल गर्न तपाईंको सफलताको लागि एक कुञ्जी हो.
साउदी अरबमा अल बाक भोजनालयमा कामहरू।
अल बिलाड बैंक सऊदी अरब
चाँडो वा पछि तपाईंको क्यारियरको साथ वैकल्पिक खोजहरु। तपाईलाई हेर्नु पर्छ बैंक अल्बिलाड एक साउदी अरेबिया हो। सुरू गर्नका लागि, यस बैंक एक संयुक्त स्टक कम्पनी हो कि जानकारी। सामान्यतया बोल्दै, अल बिलाद बैंकले 5,000,000,000 साउदी रियालहरूको कर्पोरेट पूंजीको साथ रोयल डिक्रीको स्थापना गरे। तेसैले काम गर्न धेरै राम्रो कम्पनी बनाउँछ.
बैंकले बैंकिंग व्यवसायको रूपमा अल्बिललाई सउदी अरबमा विस्तार गर्न खोज्छ। कम्पनी उद्घाटन शाखाहरू केहि नयाँ शहरहरू र क्षेत्रहरूमा। साउदी अरबमा स्थानीय कामदारहरूसँग विलम्ब बिना महिला शाखाहरू र बैंकिङ सेवा केन्द्रहरू प्रदान गर्दछ। त्यसैले कसैले पनि आफ्नो सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्दछ।
यी बिन्दुहरूलाई दिईयो, बैंक Albilad नयाँ ग्राहकहरूको लागि सेवा प्रदान गर्दछ। र सऊदी अरबमा बिस्तृत सबै स्तर र क्षेत्रहरूमा सबै बैंकिंग उत्पादन र सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्दछ। अहिलेको समयमा, तपाईं धेरै क्यारियरका अवसरहरूको आशा गर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गर्न व्यापारिक वित्त उत्पादनहरूमा कामहरू र खुदरा बैंकिंग उत्पादनमा छिटो क्यारियर। सउदी अरबमा लगानी उत्पादनको कामको साथ।
साउदी अरबमा कामदार अल बिदा बैंक।
अल फैसील्याह समूह
अल फैसलियाह समूह मध्ये एक कामको लागि उत्तम ठाउँ। साउदी कम्पनी निजी पूर्व मध्य पूर्व मा आयोजित। व्यापार को उद्देश्य को लागी, विकास कम्पनी एक बहु-व्यापार समूह बन्छ। यसलाई अर्कै रूपमा राख्नको लागि यस अवस्थामा कम्पनीको मुख्यालय साउदी अरेबियामा छ र मध्य पूर्व सेवा गर्दै। पहिलो कुरा याद गर्नुहोस् जब तपाईं बिक्रीको लागि आवेदन गर्नुहुन्छ मार्केटिंग कार्यहरू साउदी अरेबियामा। सामान्यतया साउदी अरेबियाको कम्पनी 1971 मा स्थापना भएको थियो।
सकारात्मक पक्षमा, अल फैसील्याह समूह कृषि र खाद्य व्यवसाय मा क्यारियर खोजीकर्ताहरु भित्र अग्रणी स्थितिहरु को प्रबन्धन। कम्पनी बारम्बार मध्य पूर्वमा इलेक्ट्रोनिक्स र प्रणाली बजारमा बढ्दैछ। यस कारणका लागि तपाई स्वास्थ्य सेवा र खाद्य सेवामा रोजगार पाउन सक्नुहुनेछ। सामान्यतया, समूह हो GCC क्षेत्र भर मा मान्यता प्राप्त.
लामो दौडमा, यो व्यावसायिक व्यवस्थापन टोली हो। सधैँ खुसी हुनुहोस् तपाइँ भर्ती भर्तीको साथ एक हात दिनुहोस्। र यसको विश्व-दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी प्रमुख विश्वव्यापी कम्पनीहरूसँग निश्चित रूपमा हुनेछ तपाईंलाई एक रोजगार प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ रियाद मा। अधिकांश भागका लागि सोनी, डोनोन, फिलिप्स, र एसेन्चर सहित एक कम्पनी।
सऊदी अरब संग अल फैसील्याह समूह मा नौकरी।
रियाद दैनिक दैनिक सऊदी अरब
सन्तुलनमा, समाचार पत्रमा काम पाउन प्रयास गर्नुहोस्। मिडियामा क्यारियर शीर्ष पायदान बन्छ साउदी अधिकारीहरु को लागी। रियाद दैनिक अल-यामामाह प्रेस स्थापना द्वारा प्रकाशित। यी पोइन्टहरू दिएका छन् साउदी राजधानीबाट प्रकाशित पहिलो अंग्रेजी दैनिक।
अन्ततः यदि तपाईं मिडिया र संचार मा काम खोज्दै हुनुहुन्छ। कृपया यसको बहिनी प्रकाशन मिडिया, अल-रियाद अरबी अखबारमा एक बायोडाटा थप्नुहोस्। तथ्यको रूपमा, रियाद दैनिकको किंगडमको मिडिया उद्योगमा एक लामो इतिहास छ।
इतिहास कम्पनीमा रियाद दैनिक पहिलो पटक 1960 मा एक न्यूजलेटर प्रकाशित गर्नुभन्दा पहिले यो 1985 मा एक ब्रोडसिटमा विकसित भयो। तपाईले केहि पाउन सक्नुहुन्छ भर्ती एजेन्सीहरू दुबई मा जो छन् यस कम्पनी को लागी भर्ती.
नौकरी मा सऊदी अरब संग रियाद दैनिक।
साउदी अरबमा एक अल तजज
Buraidah मा रेस्टुरेन्ट, एक विदेशका लागि उत्तम क्यारियर। वास्तविकतामा, यस उद्योग रेस्टुरेन्टको साथ 1989 वर्ष पहिले 28 स्थापना भयो। यो दिमागमा, तपाईंले यस फर्मको साथ काम प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। धेरै यस कम्पनी भित्र वाणिज्यिक क्यारियर रिक्त पदहरू.
यदि तपाई एक्सप्याट हुनुहुन्छ भने सामान्यतया सांस्कृतिक अस्तित्व राम्रो छ काम खोज्ने तरीका। अग्रभूमि क्यारियर लगानी विचारहरु GCC देशहरु मा वातावरण मा पैदा भएको छ। साउदी अरेबियामा कामहरू सुरू गर्न तपाईंले आफ्नो सीभी पठाउनु पर्नेछ। तिमी सक्छौ मध्य पूर्वमा जागिर पाउनुहोस्. तपाईंको पुनःसुरु अपलोड गर्नुहोस् GCC मा यस कम्पनीमा।
एक अल तजज रेस्टुरेन्ट ले धेरै स्थानहरुको लागि CV स्वीकार गर्दछ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिंग नौकरी खोज्ने। पृष्ठभूमिमा मुख्य रूपमा रोजगारहरू बिक्री र काउन्टर स्थितिहरूको लागि उपलब्ध छन्। अहिलेको समय सम्म CV पठाउनुहोस् यदि तपाईं जुनियर र वरिष्ठ व्यवस्थापन पदहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने।
सऊदी अरबका साथ एक अल तजाज मा नौकरी।
ALDREES पेट्रोलियम र परिवहन सेवा कम्पनी
त्यो जान्नु महत्वपूर्ण छ कि साउदी संयुक्त स्टॉक कम्पनी हो। यी बुँदाहरू दिइयो एक विशाल पेट्रोलियम कम्पनीको साथ नयाँ क्यारियर हुँदै साउदी अरब मा एक राम्रो-भुक्तानी क्यारियर हो। हालको समय सम्म कम्पनीले खुद्रा सेवाहरू सञ्चालन गर्दै छ र बहु-वस्तु यातायात सेवाहरू बन्छ जीसीसी क्षेत्रमा संगठन.
वास्तवमा, कम्पनीले नै सउदी अरबमा गुणस्तर सेवा प्रदान गर्दछन्। अर्कोतर्फ, यो संगठन होस्टले वर्ष र साथ निजी र सरकारी संगठन परियोजनाहरू उत्पन्न गर्दछ मध्य पूर्वमा व्यापार.
यससँग, दिमागमा, एक फर्म भित्र स्थिर स्थिरता सऊदी अरबमा सम्भव छ। गत सातादेखि नै यस कम्पनीको साथ समृद्ध कार्यकारी सफलता आज सम्म। यो कम्पनी पनि फिलीपीयन नौकरी खोज्नेहरू भर्ती गर्दै। त्यसैले, यो वेबसाइटमा आफ्नो भर्ती खण्ड भ्रमण गर्न साँच्चै लायक छ।
साउदी अरबमा पेट्रोलियम र ट्राभर्स सर्विसेज कम्पनीको सेयरहरू।
अल मुहाबिब समूह
कम्पनी साउदी अरबमा आधारित कम्पनीहरूको एक अन्तर्राष्ट्रिय निजी समूह हो। सकारात्मक पक्षमा, कम्पनी 1943 मा स्थापित भएको थियो। अहिले सम्म अब्दुल कादिर अल मुहैदिब एक हो राम्रो कम्पनी को लागी काम गर्न। अर्को तरिकामा भन्नु पर्दा, निर्देशक समितिका वर्तमान अध्यक्ष सुलेमान ए अल मुहैदिब हुनुहुन्छ।
कम्पनीको मुख्य रुचि सम्झौता गर्ने पहिलो कुरा यो थोक भवन निर्माण सामग्री बेचिरहेको छ। अर्को तरिका राख्न कम्पनीले खाद्य उत्पादन आयात गर्दा सऊदी अरबमा विशेष गरी मार्केटिंग र वितरण गर्ने।
अर्कोतर्फ, यो सऊदी अरब क्षेत्रको लागि एक प्रमुख व्यवसाय रहेको छ दक्षिण अफ्रिकाका लागि समूहमा रोजगारी रिक्ति। उही समयमा, कम्पनीले जीसीसीमा आफ्नो भर्ती क्षेत्र विस्तार गर्न अनुमति दिएको छ। सकारात्मक पक्षमा, पोर्टफोलियो कम्पनीले अन्य अन्नहरू समावेश गर्दछ। र अन्तमा, अग्रणी कम्पनी व्यवस्थापन टोली साउदी अरेबियाको किंगडममा खुद्रा आउटलेट चेनको स्थापना गर्न। विशाल स्टोरहरूको केहि भन्नु हुँदैन (पछि पान्डाको साथ मर्ज गरियो)।
आज सम्म एकै टोकन गरेर, समूह पाँच व्यवसायिक क्षेत्रहरूमा सक्रिय छ दुबई र मध्य पूर्वमा: खाद्य, रियल एस्टेट, भवन निर्माण सामग्री, निर्माण र उपयोगिताहरु र बुनियादी ढांचा।
सऊदी अरबका साथ अल मुहाबि समूहमा कार्यहरू।
अरब नेशनल बैंकको क्यारियर
अरब नेशनल बैंक (ANB) को महसुस गर्न महत्त्वपूर्ण। रियादमा आधारित एक प्रमुख बैंक हो, ती परिस्थितिहरूमा, सऊदी अरबमा कम्पनी भर्ती गर्दै। सामान्यतया, कम्पनी सउदी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीबद्ध गरिएको छ। त्यसैले कामको लागि बचत गर्न सजिलो छ। तर तपाईं सक्नुहुन्छ केहि अन्य स्थानहरूमा क्यारियरको बारेमा केहि काम पोष्ट पाउनुहोस्.
एएनबी समूहले व्यापक व्यावसायिक र लगानी बैंकिंग सेवा प्रदान गर्दछ। वर्तमान समय सम्म, तपाईं बैंकिंग सेक्टर संग एक नौकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस कम्पनीको साथ नयाँ कार्य सुरु गर्दा सबै कुराहरु विचार गरे। समय समयमा कम्पनी भर्ती बिक्री अधिकारका लागि। अरब नेशनल बैंक में सऊदी अरब में 156 शाखाएं हैं। यसको सबैभन्दा ठूलो शेयर अरब अरब हो, निधि को 40% पकडा।
नौकरी मा सऊदी अरब संग अरब नेशनल बैंक।
बलबुइड ग्रुप अफ कम्पनी (बीजीसी)
बालुबैदले रोजगार दिए एक अन्तर्राष्ट्रिय क्यारियर खोज दुनिया भर मा। BGC को बहुराष्ट्रिय कार्यबल 1,700 भन्दा बढि छ मध्य पूर्वमा कर्मचारीहरू। यसलाई अर्को तरिकामा राख्नको लागि, कम्पनीलाई 1952 वर्षौं अघि 65 मा रकम प्रदान गरिएको थियो। त्यसोभए यदि तपाइँ दीर्घकालीन क्यारियर खोज्दै हुनुहुन्छ। यो कम्पनी धेरै क्यारियर क्षेत्रहरु को लागी उपयोग मा एक उत्तम हो.
सबै माध्यमबाट, कम्पनीहरूको बलबड ग्रुपले घर भित्र निरन्तर प्रशिक्षणको लागि प्रतिबद्ध छ। त्यसैगरी विदेश जानेको क्यारियर खोज्ने। र यद्यपि यो सत्य हुन सक्छ यसको संगठनको ससुराकरणले उनी हरेक महिना नयाँ कर्मचारीहरूलाई भर्ती गर्दैछ।
समूहको ताजा स्नातक विद्यार्थी र प्रबन्धकहरूलाई भर्ती गर्दै। मध्य पूर्व, अफ्रिका, मा 40 भन्दा बढी देशहरूबाट दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी अमेरिका र पक्कै पनि, साउदी अरेबियाको अधिराज्य।
नौकरिहरु मा सऊदी अरब संग Balubaid।
बिन कुरया सऊदी अरबमा
अर्कोतर्फ, यदि तपाईं लामो सर्तहरू रिक्त पदहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। बिन कुरया समूहमा हेर्नुहोस्। कम्पनी एक साउदी निजी-आयोजित होल्डिंग कम्पनी हो। BQ भाडाको साथ कम्पनी प्रबन्धन सेवाहरू। र यो साउदी व्यवसाय सफलताको लागि यसको सहायक कम्पनीहरू हो। कम्पनी साउदी अरब मा अग्रणी भारी उपकरण भाडा फर्म हो।
सबै बिन कुरैभन्दा माथि मध्य पूर्वको सबैभन्दा ठूलो उपकरण भाडा मध्ये एक हो। कम्पनी प्रमुख कार्यालय सउदी अरबमा धहरानमा आधारित छ। कम्पनी विकासको उद्देश्यका लागि। कम्पनीले भरिएको नयाँ परियोजनाहरूमा भर्खरै सम्पूर्ण राज्यमा भर्ती गर्दैछ। तपाईले हाम्रो भ्रमण गर्नु पर्छ दुबई व्हाट्सएप समूह लिङ्क। किनकि भर्तीका केही सल्लाहकारहरूले रोजगारी प्रस्तावहरू पोस्ट गर्दै छन्।
साथै, तपाईंलाई सम्झना छ कि यो कम्पनी अत्यधिक छ Google मा मान्यता प्राप्त। विशेष गरी तिनीहरूको भर्तीको लागि।
रोजगारको लागि निष्कर्ष
त्यहाँ अन्य धेरै विकल्पहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय जागिर खोज्नेहरूको लागि। ती मध्ये एक हो मध्य पूर्वमा होटल नौकरी खोज्दै। त्यहाँ अन्य देशहरू पनि छन् जहाँ मानिसहरूले काम पाउन सक्दछन्। नयाँ एक्सट्याट्स रोजगारी प्रदान गर्दै संसारभर बाट हरेक दिन। त्यसोभए तपाईंले गर्नु पर्छ एब्रोआ सार्नु अघि दुई पटक सोच्नुहोस्d अर्को तर्फ, तपाईं हाम्रो मा रोजगार को लागी खोजी गर्न सक्नुहुनेछ दुबई व्हाट्सएप जर्सी समूह। धेरै स्मार्ट तरिका रिक्त स्थानका लागि आवेदन गर्नु अघि तपाईं मध्य पूर्व सम्म पुग्नु अघि।
राख्न को लागी सुपर लोकप्रिय तरीकाहरु एमिरेट्स र साउदी अरेबिया। सामान्यतया बोल्नु भनेको हो आफ्नो मोबाइल को उपयोग गर्न को लागी उपकरण को रूप मा प्रयोग गर्नुहोस। यसबाहेक नयाँ नौकरी चाहनेहरूसँग नौकरी खोजी गर्न पर्याप्त समय छैन। निम्न वर्षहरूमा, नयाँ रिक्तरीहरू मध्य पूर्व सँगसँगै आउनेछन्। उदाहरणका लागि, एक धेरै लोकप्रिय गन्तव्य भर्ती दुबई र अबू धाबी छ। त्यसैले तपाईंले धेरै देशहरूमा न केवल सऊदी अरबको जागिरको लागि रोजगारीको खोजी गर्नुपर्छ।
साउदी अरबमा जागिरहरू - यो प्रेम र आजकल रोजगार लिनुहोस्। अर्कोतर्फ, तपाईले सम्पूर्ण खालका भर्ती कम्पनीहरू पनि हेर्नु हुन्छ। हामी तपाईंको लागि उपस्थित छौं क्यारियरजेट भर्ती फर्म र राक्षस नौकरी खोज इन्जिन संयुक्त अरब अमीरात मा। तिनीहरू साँच्चै तपाईंको CV सँग लागू गर्न लायक छन्।
सउदी अरबमा जागिरको लागि अपलोड पुनः सुरु गर्नुहोस्!
के तपाईँ खोज्न चाहनुहुन्छ? सउदी अरब जागिर? यद्यपि यो सत्य हुन सक्छ हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछौं.
दुबई सिटी कम्पनीको साथ तपाईले नयाँ क्यारियर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ साउदी अरब!
पुन: सुरु गर्नुहोस् पृथ्वीमा सबैभन्दा छिटो बढ्दो शहरमा! - रियाद मा नौकरिहरु
दुबई शहर कम्पनी अब राम्रो प्रदान गर्दै गाइड दुबई मा रोजगार को लागी। हाम्रो टीमले हाम्रो लागि प्रत्येक भाषाको लागि जानकारी थप्ने निर्णय गर्यो Dubai दुबई। त्यसो भए यस कुरालाई ध्यानमा राखेर तपाई अब गाईड, सुझाव र रोजगार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ संयुक्त अरब एमिरेट्स तपाईंको आफ्नै भाषाको साथ।